घर यूरोपियन फुटबल स्टोरीहरू पोर्तुगाली फुटबल खेलाडीहरू फ्रान्सिस्को ट्राइनको बाल्यकाल कहानी प्लस अनटोल्ड बायोग्राफी तथ्यहरू
हाम्रो फ्रान्सिस्को ट्राइनको जीवनीले तपाईंलाई उनको बाल्यावस्थाको कहानी, प्रारम्भिक जीवन, परिवार, आमा बुबा, प्रेमिका, पत्नी हुनु, कारहरू, जीवनशैली र व्यक्तिगत जीवन बताउँछ।
सरल शब्दमा भन्नुपर्दा, हामी यहाँ उनको जीवनको शुरुवातदेखि फ्रान्सिस्को ट्रिन्कोको पूर्ण विच्छेदन छ जब उहाँ प्रख्यात भए। सुरु गर्नु भन्दा पहिले, हामी उहाँको सुरुवाती वर्षहरू र उदयमाथि एक नजर हेरौं - उसको बायोको एक सारांश।
हो, तपाईं र मलाई थाहा छ एफसी बार्सिलोना ठूलो क्लबको रूपमा, कुनै पनि सम्भावित औसत खेलाडीको लागि जान सक्दैन, त्यसैले यो पोर्तुगाली प्रतिभाको अधिग्रहण।
उहाँ तल आफ्नो मैदानको सामर्थ्य प्रदर्शन गर्न थाल्दा रोनाल्ड कोमान, हामी धेरै प्रशंसकहरू महसुस गर्दैनौं (सायद तपाईले) फ्रान्सिस्को ट्रिन्कोको बायो पढ्नु भएको छ। अब, आफ्नो समय बर्बाद नगरी, हामी सुरुको वर्षको कथाबाट सुरु गरौं।
फ्रान्सिस्को ट्राइनको बाल्यकाल कहानी:
जीवनी सुरु गर्नेहरूको लागि, उहाँ पूर्ण नामहरू राख्नुहुन्छ; फ्रान्सिस्को एन्टोनियो माचडो मोटा कास्ट्रो ट्राइनको। पोर्तुगाली फुटबलर डिसेम्बर १ 29 1999। को २ day तारिखमा उनको आमाबुवा, श्रीमती र श्रीमती गोन्कालो ट्राइनको, उत्तरी पोर्तुगलको भियाना डो क्यास्टेलोमा जन्म भएको थियो।
ट्रिन्को पहिलो बच्चा र छोराको रूपमा जन्मेको थियो उनको आमा र बुबा बीचको मिलनबाट। ऊ आफ्नी बहिनीको साथ हुर्कियो, जुन फोटोबाट उसको जुनियर देखिन्छ। फ्रान्सिस्कोको जन्म हुनुभन्दा पहिले, उनको भाग्य चलिरहेको थियो। हो, तपाईं अनुमान लगाउन सक्नुहुनेछ कि उहाँ अक्सर आफ्नी आमालाई लात हिर्काउँनुहुन्छ, जस्तो कि ऊ उनीसँग गर्भवती हुँदा उसको पेटमा फुटबल खेल्छ।
वास्तवमा, ट्रिन्काओको फुटबलप्रति आकर्षणले उनलाई सधैं यो आफ्नो मनपर्ने खेलौनाको रूपमा बनाउँथ्यो, जब उहाँ एक केटा थिए। प्रारम्भमा, कसैले पनि सोचेको थिएन कि सानो देशको केटोले फुटबलको लागि धेरै जोश देखाउँदछ, आफैलाई २० वर्षको उमेरमा एफसी बार्सिलोनाको रोस्टरमा हेरौं।
फ्रांसिस्को ट्राइनको परिवार पृष्ठभूमि:
Trincao जहिले पनि उनी सुनको थालमा चाहिने सबै प्राप्त गर्दैनन्। त्यहाँ कुनै महँगो खेलौना वा उपहारहरू थिएनन्, फुटबलको बाहेक र उसको प्रारम्भिक जीवन लक्जरीले भरिएन। तसर्थ, उहाँ एक मध्यम-वर्ग पारिवारिक पृष्ठभूमिमा हुर्काइनुभयो र तल चित्रमा उनका नम्र आमा बुबा- श्रीमती र श्रीमती गोन्कालो ट्राइनकाओ हुन्। तपाईले अनुमान लगाउन सक्नुहुन्छ कि तस्विर लिईएको बेला।
फ्रान्सिस्को ट्रिंको मूल:
ट्राइनको पुर्खाको विस्तृत विश्लेषणले देखाउँदछ कि उसको आमा र बुवा पोर्तुगाली मूलका हुन्। उसको जन्म पछि, उसको परिवार उत्तरी पोर्तुगल मा बस्न को लागी बस्न र काम गरीरहेको छ।
के तपाईंलाई थाहा छ? ... फ्रान्सिस्को ट्रिन्को र पेड्रो नेटो पोर्चुगलको उत्तरी क्षेत्रमा मिन्हो प्रान्तमा रहेको उही घर शहर (भियाना डो क्यास्टेलो) का ओलार। शहरको वास्तुकला र स्मारक डिजाइन लुकेका छन्। तसर्थ, भियाना डो कास्टेलो पोर्चुगलको सबैभन्दा सुन्दर शहरहरू मध्ये एक हो।
फ्रान्सिस्को ट्रिन्कोको लागि फुटबलको सुरुवात कसरी भयो:
धेरै महत्वाकांक्षी बच्चाहरू जस्तै, ट्रिन्को आफ्ना साथीहरूसँग फुटबल खेल्न सडकमा उत्रियो। जवान केटाको लागि, फुटबल त्यो दिन बाहिर दिन पूरा गर्न सक्ने उत्तम चीज जस्तो देखिन्थ्यो। तसर्थ, उसले आफ्नो प्रशिक्षणलाई गम्भीरताका साथ लिए र आफू एक पेशेवर हुने दिनको सपना देखिरहे।
कडा परिश्रम, तिनीहरू भन्छन्, सधैं भुक्तानी आफ्नो अधिकांश समय स्थानीय फुटबल प्रशिक्षणमा लगानी गरेपछि, त्रिन्को चाँडै आफ्नो परिवारको गृहनगरमा क्लब (एससी वियानान्स) मा प्रवेश गरे। त्यतिखेर एकेडेमीमा सानो ट्रिन्को सधैं बलको नजिकै बस्ने इच्छा गर्थे। ठीक समयमा, ऊ फुटबल बलमा चिप्लिएको छ।
फ्रान्सिस्को ट्राइनको प्रारम्भिक क्यारियर जीवन:
आफ्नो प्रारम्भिक फुटबल क्वेस्टमा, ट्रिन्कोओले आफ्नो प्रदर्शनको साथ धेरै असंगति अनुभव गरे। भाग्यवस, उहाँ कुनै समय मा लिनुभयो र आफ्नो टीमका साथीहरु भन्दा माथि उठ्नुभयो।
अरू ठूला चुनौतीहरूको सामना गर्न, फ्रान्सिस्को ट्रिन्काओका अभिभावकहरूले आफ्ना छोरालाई पोर्तोको एकेडेमीमा परीक्षणको लागि अनुमति दिन्छन्, जुन देशको सब भन्दा ठूलो एक हो।
धन्यबाद, उहाँ बित्नुभयो र २०० Tr मा ट्रिन्काओ एफसी पोर्टो युवा टीममा सामेल भइरहेको थियो। क्लबमा, उनीसँग राम्रो सुविधाको पहुँच थियो र धेरै एक्सपोजर प्राप्त गरियो। त्यतिखेर, यो जवान आफ्नो टोलीको सबैभन्दा सानो बच्चामा थिए। तिनीहरू सबै आफ्नो एफसी पोर्टो जर्सीमा कति सुन्दर देखिन्छन् हेर्नुहोस्। के तपाईं तीनिहरु बीच Trincao भेट्न सक्नुहुन्छ?
पोर्टो एकेडेमी मा, त्यहाँ उच्च अपेक्षाहरु थिए। अर्कोमा कम प्रतिस्पर्धाको खोजी गर्न, फ्रान्सिस्को ट्राइनकाओ अभिभावकले होशियारीका साथ उनलाई पोर्टो छोड्न आफ्नो अघिल्लो क्लबको लागि अनुमति दिए। त्यसपछि उनले एससी ब्रागामा प्रगति गरे जहाँ उनले आफ्नो युवा जीवनको विकास पूरा गरे।
फ्रान्सिस्को ट्रिंको रोड फेम कथा:
एससी ब्रागामा, युवा पोर्तुगालीहरूले दिन र रात आफ्नो कौशलता र शुद्धता विकास गर्दै प्रशिक्षण गरे। केहि बर्ष पछि, उनको सुधार एकदम शंकास्पद भयो। २०१/2018/२०१ season सत्रमा, उनी एससी ब्रागाको वरिष्ठ टीममा बढुवाको साथ आशिष्‌ पाए।
एक दुर्लभ प्रतिभा भएको कारण, ट्रिन्कोको कडा परिश्रमले उनलाई क्लबको पहिलो एघार सूचीमा प्रवेश गरेको देख्यो। क्लबमा, उसको प्रदर्शनले उनलाई एक राष्ट्रीय प्रशंसा पाएन। यद्यपि पोर्चुगल यु १ team टोलीका लागि गोल गर्नेमा उसको प्रस्टिसन धेरै व्यक्तिको ध्यानाकर्षण गर्‍यो।
के तपाईंलाई थाहा छ?… फ्रान्सिस्को ट्रिन्को पोर्तुगलको टोलीको हिस्सा थियो जसले २०१ 19 मा यूईएफए यूरोपीय अण्डर १ Champion चैम्पियनशिप जित्यो। वास्तवमा भन्ने हो भने, उनी टूर्नामेन्टका शीर्ष गोल स्कोरर बने।
फ्रान्सिस्को ट्राइनको सफलता कहानी:
स्टारडमको लागि आफ्नो यात्रामा, ती जवान व्यक्तिले आफ्नो मार्गमा ल्याएका सबै चुनौतीहरूमाथि विजय पाए। उनको वरिष्ठ टीमको डेब्यु भएको मात्र दुई सत्रमा, ट्राइनकाओले आफ्नो पक्षलाई २०१––२० टक दा लिगा जित्न सहयोग पुर्‍याउन ठूलो योगदान पुर्‍यायो। तल चित्रित एक रमाइलो लाड छ जो विश्वास गर्दछ कि उसले ब्रागाको साथ ठूलो उपलब्धी गरेको छ।
के तपाईंलाई थाहा छ?… एफसी बार्सिलोना फ्रान्सिस्को ट्रिन्कोप्रति आकर्षित भए, जसले उनलाई २०२० मा जनवरी २०२० मा million१ करोड डलरको करारमा हस्तान्तरण गर्‍यो। द ज Young्गस्टरले २० 31० को जुलाईमा स्पेनिश विशालमा सम्मिलित हुनु अघि ब्रागासँगको २०१ 2020-२० सत्र पूरा गर्न अनुमति दिइयो। सत्य हो, यो एक प्लेयर देख्न विरलै छ, अझै आफ्नो उमेर को धेरै जवान, को एक खरीद को खण्ड € 2019 मिलियन।
एक महिना पछि उनी एफसी बार्कामा सम्मिलित भए, फारवर्डलाई पोर्तुगाली राष्ट्रिय टोलीमा बोलाइयो, जसमा कुनै श his्का छैन, यसले आफ्ना आमाबाबु र परिवारका सदस्यहरूलाई आफ्नै गर्व महसुस गर्यो।
शुद्ध खुशीको त्यो क्षण उनको राष्ट्रिय पदार्पणमा आएको थियो, जब उनी प्रतिस्थापन गर्दै प्रतिस्थापन भए बर्नार्डो सिल्वा पोर्तुगालको सेप्टेम्बर २०२० मा क्रोएसियाको बिरूद्ध 4-१ ले जितेको थियो।
कुनै श doubt्का बिना, हामी फुटबल प्रशंसकहरु अर्को हेर्न को कगार मा छन् CR7 हाम्रो आँखाको अगाडि, एक विश्व स्तरीय प्रतिभा बन्न उसको बाटो फुलिरहेको छ। बाँकी, हामी उनको बायो भन्छौं, अब इतिहास हो।
फ्रान्सिस्को ट्राइनको प्रेमिका को हो?
पहिलो र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भने, उसको प्यारा हेराइले महिला प्रशंसकहरूलाई आकर्षित गर्दैन भन्ने तथ्यलाई इन्कार गर्न मिल्दैन - जसले आफूलाई सम्भावित प्रेमिका र पत्नी सामग्रीको रूपमा लिने छन्।
आफ्नो क्यारियरमा १००% फोकसको तत्काल आवश्यकताको कारण, ट्रिन्कोले फोटोहरू राख्ने बारेमा चिन्ता लिएको छैन जसले उनको प्रेमिका वा पत्नीलाई सार्वजनिक आँखामा प्रकट गर्दछ। वा हुन सक्छ उहाँसँग एक छैन - कम्तिमा अहिलेको लागि।
निस्सन्देह, बार्सिलोनाका खेलाडी यस समयमा कडा मेहनत गरिरहेका छन् आफ्ना भविष्यका बच्चाहरू र पत्नीलाई राम्रो जीवन दिन। यस कारणले गर्दा, हामी आशा गर्दछौं कि उनकी श्रीमतीले कुनै दिन त्रिन्को जीवनमा लामो समयसम्म गरेका त्यागहरू महसुस गरेकी हुनेछन्।
फ्रान्सिस्को ट्रिन्को निजी जीवन:
यद्यपि हामी असल र खराबले भरिएको विशाल संसारमा बाँचिरहेका छौं, सोकर ताराले एक सभ्य जीवन बिताउन छनौट गरेको छ। साथै, उसको जेनिटलिटी र नम्रता हृदयमा निर्विवाद छ।
के तपाईंलाई थाहा छ?… ट्रिन्कोको व्यक्तित्व मकर राशि चक्रको गुण हो। तपाईंले सायद सुन्नुभएको हुन सक्छ कि उनको कुंडलीका व्यक्तिहरूले आनन्दित हुन कम जटिल जीवनको प्रबन्ध गर्छन्। ट्रिन्काओ र फेरि, एउटा कुरा हामीले हेरेका थियौं कि त्यो उमेर भन्दा बढी पाको देखिन्छ।
प्रत्येक चोटि ऊ अनुहारमा मुस्कान लगाएको देखेर ऊ कत्ति हर्षित देखिन्छ साँच्चै अमूल्य छ। सत्य कुरा के हो भने, ट्रिन्कोलाई उनले आफ्नो इन्स्टाग्राममा अपलोड गरेको लगभग सबै तस्बिरहरूमा हाँस्दै कैद गरिएको छ। तल व्यक्तिहरूलाई हेर्नुहोस्, त्यहाँ कुनै पनि तथ्यलाई इन्कार गरिरहेको छैन कि ऊ मुस्कुराएको वा हाँस्दा कुनै पनि प्यारा देखिन्छ।
फ्रान्सिस्को ट्रिन्को जीवनशैली:
यो आश्चर्यजनक कुरा होइन कि उसले सुन्दर दृश्यका ठाउँहरूमा यात्रा गर्न मनपराउँछ। सत्य कुरा के छ भने, कोमल व्यक्तित्व एक महत्वपूर्ण कारण हो कि ट्रिन्कोओ शान्तिपूर्ण जीवनले भरिएका ठाउँहरूमा भ्रमण गर्न इच्छुक छ।
सुन्दर ठाउँहरूको लागि स्वाद पाएपछि, उनले प्राय: शान्त समुद्री तटहरू र कम जनसंख्या भएका क्षेत्रहरूको भ्रमण गर्दछन् ताकि उसलाई आफ्नो प्राथमिकतालाई पुन: रणनीति बनाउन मद्दत गर्दछ। ट्रिन्काओको नम्र जीवनशैली सजिलैसँग यसबाट सजिलैसँग देख्न सकिन्छ र यसमा महँगो कार, ट्याटू, बज र केटीहरू आदि छैन।
फ्रान्सिस्को ट्राइनको शौक:
यद्यपि उहाँ तपाईको मनपर्ने छैन रोजर फेडरर, Trincao आफ्नो फुर्सद अवधिमा टेनिस खेल्छ। छुट्टीको समयमा, उसले खेलमा आफ्नो सीप विकास गर्न प्राय: समय खर्च गर्दछ। एक पटक उनले एक पटक स्न्यापशट लिएका थिए (तल देखाइएको छ) आफ्ना किट्सको साथ क्याप्शन; "मेरो सीप सुधार गर्दै"।
फ्रान्सिस्को ट्रिंको नेटवर्थ:
बार्सिलोना सर्ने निश्चित रूप मा आफ्नो वित्तीय क्षमता मा सुधार भएको छ र सम्भवतः, ठूलो भारी ज्याला वहन गर्न सक्ने सम्पत्ति संख्या। त्यसकारण यो जीवनी लेख्दा हामी अनुमान गर्छौं फ्रान्सिस्को ट्रिन्कोको कुल सम्पत्ति करीव १ .19.5।। मिलियन यूरो छ।
फ्रांसिस्को ट्राइनको पारिवारिक जीवन:
अनुसन्धानको क्रममा हामीले यो जान्यौं कि उसको परिवारले विशेष गरी उसको बुवाले आफ्नो क्यारियरको बाटो पत्ता लगाउन धेरै भूमिका खेल्छन्। यस सेक्सनमा, हामी तपाईंलाई फ्रान्सिस्को ट्रिन्कोका आमाबुवा र परिवारका सदस्यहरूको बारेमा तथ्यहरू बताउने छौं।
फ्रान्सिस्को ट्राइनको फादरको बारेमा:
गोन्कालो ट्राइनकाओ, फुटबलरका बुवाले पक्कै पनि आफ्नो प्रतिभाशाली छोराको पालनपोषणमा उनको बाबुको जिम्मेवारी पूरा गरे। रिपोर्टमा यो छ कि गोन्कालो उसको एजेन्ट हो र ट्रिन्काओले आफ्नो क्यारियर सम्बन्धी व्यवहारमा उनको बुबाको धारणा अनुसरण गर्छन्। उनले एक पटक टिप्पणी गरे;
“मेरो बुवा गर्व छ कि म अब मेस्सी संग खेल्न सक्छु। तपाईंलाई थाहा छ, हामी संसारको सर्वश्रेष्ठ खेलाडीको बारेमा कुरा गर्दैछौं। ”
फ्रान्सिस्को ट्रिन्काओ आमाको बारेमा:
बार्कासँगको ठूलो आशाको बाबजुद पनि, उनको आमा, श्रीमती गोन्कालो अझै पनी उनको छोरालाई क्लबसँग खेल्ने दबाबमा नपर्न सुनिश्चित गर्न उनको मैदानमा उभिएकी छन्। त्यहाँ उनी आफ्नो पतिसँग सहमत भएको सबै सम्भावनाहरू छन्, उनको परिवार बार्सिलोना शहरमा बस्नका लागि ताकि उनले आफ्नो आमाको हेरचाहलाई निरन्तरता दिईन्।
फ्रान्सिस्को ट्राइनको भाई बहिनीहरू को बारे मा:
पहिले नै भनिएझैं फुटबलरको एक बहिनी छ जो धेरै उनकी आमा जस्तो देखिन्छ। Trincao एक पटक प्रेस ब्रीफिंग मा आफ्नो बहिनी उल्लेख - उनले कोभिड १ p महामारीको बेला उनको र उनका बाबुआमासँग घरमा भने। यद्यपि उसको भाई छ कि छैन भन्नेबारे थोरै दस्तावेज रहेको छ तर फ्रान्सिस्को ट्रिनकोको परिवारको फोटोले हेरेजस्तो देखिन्छ, त्यहाँ एक जना बहिनी मात्र देखिन्छ।
फ्रान्सिस्को ट्राइनको सम्बन्ध बारे:
जहाँसुकै भए पनि, उनका काका र काकी लगायत उनका विस्तारित परिवारले प्रशंसाको गीत गाउनु पर्छ - उनीहरूलाई फुटबल मार्फत गर्वका लागि। यद्यपि उनका आमाबुवा र हजुरआमा हजुरआमा लगायत त्यहाँ उल्लेख गरिएको छैन।
फ्रान्सिस्को ट्राइनको अनटोल्ड तथ्यहरू:
पोर्तुगाली फारवर्डको जीवन कथा समेट्न, यहाँ केहि तथ्यहरू छन् जुन तपाईंलाई उहाँको बारेमा पूर्ण ज्ञान प्राप्त गर्न मद्दत गर्दछ।
प्रति वर्ष € 3,977,161
प्रति महिना € 331,430
प्रति हप्ता € 76,366
प्रति दिन € 10,909
प्रति घण्टा € 455
प्रति मिनेट € 7.58
प्रति सेकेन्ड € 0.13
बार्सिलोनाको औसत नागरिकले वार्षिक 48,126 82.6,१२XNUMX युरो कमाउँछ। यसको मतलव उनीहरूले लगभग .XNUMX२..XNUMX वर्ष काम गर्नुपर्नेछ जुन एक वर्षमा ट्रिन्को कमाई गर्दछ।
तथ्य # १: घडीले टिकको रूपमा आय:
तल अवलोकन गरिए अनुसार हामीले फ्रान्सिस्को ट्रिन्कोको पारिश्रमिकको विश्लेषण रणनीतिक ढ put्गले राख्यौं जुन तपाईं यहाँ आइपुगेको क्षणदेखि हरेक सेकेन्डमा गनिन्छ।
यो के हो फ्रान्सिस्को ट्रिकोओले कमाएको छ किनकि तपाईंले उसको बायो हेर्न शुरू गर्नुभयो।
तथ्य # १: फिफा सम्भावित:
खेल विश्लेषकको साथसाथै, सिमुलेशन भिडियो गेमले ट्रिन्काओले आफ्नो फुटबलको अधिक क्षमता खोल्ने सम्भावनाको पनि कल्पना गर्छ। युवा हामी पक्कै फिफा गेमरहरु को लागी एक महान अधिग्रहण हुनेछ जो करियर मोड खेल्न रुचाउँछौं।
तथ्य # १: फ्रान्सिस्को ट्रिंको धर्म:
उनको पहिलो नामको आधारमा पुर्तुगालीहरूले पक्कै पनि सम्भवतः क्याथोलिक विश्वासको ईसाई हुन् भन्ने कुरामा कुनै शंका छैन। के तपाईंलाई थाहा थियो?… फ्रान्सिस्को नाम क्याथोलिकहरूले व्यापक रूपमा वहन गरे जसले सेन्ट फ्रान्सिसलाई आफ्नो संरक्षक सन्तको रूपमा छनौट गरे। तसर्थ, ट्रिन्काओका अभिभावकहरू एसिसीको सेन्ट फ्रान्सिसले उसको लागि निर्देशन र अन्तर्बिन्ती गर्न चाहेको हुन सक्छ।
तथ्य # १: स्थानीय नायक:
पोर्तुगाली नगरपालिका भियाना डो कास्टेलो, जहाँ फ्रान्सिस्को ट्रिन्कोको परिवारका सदस्यहरू उनलाई ठूलो सम्मान गर्दछन्। यहाँ, गृहनगरको नगरपालिका अधिकारीहरु उनीहरुलाई एक पदक पछि प्रदान गर्व को गर्व को लागी। अपेक्षाकृत कम उमेरमा ट्रिन्कोको क्यारियर उचाइले उनीहरूलाई अचम्मित बनाएको हुनुपर्छ।
फ्रान्सिस्को ट्रिन्कोको व्यक्तिगत प्रोफाइलको द्रुत पकड प्राप्त गर्न, यहाँ उनको बायोको सारिक सारांश छ।
पुरा नाम: फ्रान्सिस्को एन्टोनियो माचडो मोटा कास्ट्रो ट्राइनको
उपनाम: नयाँ क्रिस्टियानो
जन्म मिति: 29th डिसेम्बर 1999
जन्मस्थान: भियाना डो कास्टेलो, पोर्तुगल
अभिभावक: श्रीमान र श्रीमती गोन्कालो ट्राइनको
नेट मूल्य: पाउन्ड 17 मिलियन
वार्षिक वेतन: £ 3,645,600
उचाइ: १.1.84 मीटर (मीटरमा) र ′ ′ ० ″ (फिटमा)
रुचि: लॉन टेनिस, भिडियो खेलहरू, र हेर्दै चलचित्रहरू
को युग को रूप मा सी रोनाल्डो अन्त्य हुन्छ, ट्राइनको जस्ता युवा खेलाडीहरूले उनको नामलाई बदल्न सेट अनन्त संख्याको ताराहरूको बीचमा मोहर लगाएका छन्। यो उपलब्धि हासिल गर्न उनको युवा प्रशिक्षकहरु र पक्कै पनि परिवारका सदस्यहरु - विशेष गरी उनका बुवा गोन्कालोको सहयोग बिना सम्भव छैन।
आफ्नो २१ औं जन्मदिन अघि, पोर्तुगाली फुटबलरले उसको उमेरका धेरैले सपना देख्न सक्ने कुरा पूरा गरे। फ्रान्सिस्को ट्रिकोओको जीवनीले हामीलाई सिकाउँछ कि भविष्य उनीहरूकै हो जसले निरन्तर मुस्कुराउँछन् उनीहरूको सपनाको सुन्दरतामा विश्वास गर्दै।
कृपया यदि तपाईले केहि देख्नु भयो जुन उसको जीवन कथामा सही देख्दैन भने कृपया हामीलाई थाहा दिनुहोस्। अन्यथा, हामीलाई भन्नुहोस् तपाइँ फ्रान्सिस्को ट्रिन्कोको बारेमा के सोच्नुहुन्छ।